Ambohitromby Fenoarivobe: notohanana ny tantsaha | NewsMada
Ambohitromby Fenoarivobe: notohanana ny tantsaha
Notokanana, omaly 28 aogositra, ny Birao ifoton’ny fananan-tany (Bif) ao amin’ny kaominina Ambohitromby, distrika Fenoarivobe, faritra Bongolava. Nahazo fitaovam-piasana maro toy ny ordinatera, ny fanontana taratasy, ny GPS, ny fanaka birao, sns, koa ity birao ity ahafahany miasa araka ny tokony ho izy.
Natao tamin’ity fotoana ity koa ny fametrahana ny vatofototry ny fotodrafitrasa, tohodrano, afaka manondraka velaran-tany 340 ha any Bezahatra sy any Andoharano (50 ha) samy ao amin’ny kaominina Ambohitromby, any Mahabe (160 ha), Idoko (63 ha) ary Ampandrabe (30 ha) samy ao amin’ny kaominina Ambatomainty Atsimo. Napetraka ihany koa ny vatofototry ny fanarenana ny lalan-tany mampifandray an’i Manakambahiny, ny kaominina Bevato, distrkan’i Tsiroanomandidy amin’Ambohitromby sy i Tsiroanomandidy, mirefy 126 km.
Fanatsarana ny fambolena
Manampy ireo, nomena zezibazaha DAP (5 taonina) sy Urée (5 taonina) koa ny tantsaha any an-toerana, miaraka amin’ny fitaovam-pambolena, toy ny fiavam-bary miisa 450. Nahazo moto iray ny mpanolotsaina ho an’ny fampandrosoana ambanivohitra ao amin’ny kaominina Ambohitromby sy Ambatomainty. Namaranana ny fotoana ny famoahana ny andiany voalohany nahavita fiofanana ao anatin’ny fandaharanasa ho an’ny tanora mpandraharaha Projermo.
Niara-nanatrika ireo rehetra ireo ny minisitry Fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin’ny filohan’ny Antenimierandoholona.